कुबेर मर्चेन्ट अब सिटी एक्सप्रेसको नाममा — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > कुबेर मर्चेन्ट अब सिटी एक्सप्रेसको नाममा
कुबेर मर्चेन्ट अब सिटी एक्सप्रेसको नाममा
काठमाडौं । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएको कुवेर मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सको सेयर कारोबार अब सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको नामबाट हुने भएको छ । नेप्सेले यो कम्पनीको सेयर कारोबार सिइएफएल ( CEFL ) कोडमा हुने जनाएको छ ।
यस अघि कम्पनीको सेयर कारोबार केएमबिएसएल (KMBSL ) कोडबाट हुँदै आएको थियो ।कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको ११ औ बार्षिक साधारणसभाले ६० प्रतिशत सेयर हिस्सा दिएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही साधारणसभाले कम्पनीको नाम परिर्वतन गरेर सिटी एक्सप्रेस इन्टरनेशनल फाइनान्स लिमिटेड राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो ।
नयाँ लगानीकर्ता भित्रयाएपछि गत मंसिरमा राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई शर्त सहित समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरेको थियो । कम्पनीमा सिटी एक्सप्रेस निकट केही व्यवसायी, गैर आवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको लगानी थपेका हुन् ।राष्ट्र बैंकले सञ्चालक तथा ब्यवस्थापकहरुले ऋणको चरम दूरुपयोग गरेर संस्थालाई धरासायी बनाएको भन्दै २०६९ पुसमा कुवेरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
कम्पनी समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएपश्चात नयाँ व्यवस्थापन, नयाँ सञ्चालक समिति र नयाँ नामबाट कार्य अगाडि बढाईएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल घिमिरेले बताए । उनले आगामी असारसम्म कम्पनीको चुक्तापूँजी ४० करोड पुर्याउने योजना रहेको बताए ।
२० करोड पूँजीमा एक बराबर एक हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रयोजन अनुसार संस्थापकहरुको कल ईन एडभान्स सहित चुक्ता पूँजी २८ करोड पुगेको घिमिरेले बताए । अब साधारण सेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेर चुक्तापूँजी ४० करोड पुर्याउछौ, घिमिरेले भने ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यो कम्पनीले ०७६ मंसिरसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकको चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ न्युनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ फागुुण २८ गते १३:२१ मा प्रकाशित
भौतिक पूर्वाधार अभावले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित
तीन महिला खेलाडी सम्मानित
१५ अंकले बढ्यो सेयर बजार
एनआईसी एशिया ग्राहकलाइ सामसुङ मोबाईल खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
कतै सेयरमा तपाईको रकम डुब्ने खतरा त छैन ? पुलिंग अपराधबाट बच्नुहोस् !
सूर्तीले उडाइँदैछ जहाज !